Faallo: Maan-gaabnimada Khawaarijta kaddib geeridii Abu Zubeyr (Muuqaalkii YouTube)
05 September, 2017 in by BANA Mogdishu Office
Kooxda al-Shabaab fiidiyow ayay soo saareen quseeyo noloshii amiirkoodii dhintay Axmed Cabdi aw-Maxamuud Ducaale Warsame Godane, loona yaqaanno Abu Zubeyr.
Horta tusaale iyo qudwo waxaa inoo ah Nebi Muxammad—sallallaahu calayhi wasallam—iyo asxaabtiisii iyo taabiciinta iyo saalixiintaba. Hab-dhaqan iyo akhlaaq tayo sare leh ayayna inooga tageen. Iyaga ayaana ah muraayadda lagu eegayo dhaqan walba oo uu la yimaado qof diinta u adeegayo. Hab-dhaqankii salafka ee turista iyo fiiro-dheerida ku saleysnaa wuxuu lid ku yahay hab-dhaqanka silloon oo dulmiga iyo fiiro-gaabnimada salka ku hayo ee khawaarijta Soomaaliya.
Fiidiyowga al-Shabaab qeyb af-Carabi ah iyo qeyb af-Soomaali ahba wuu ka koobnaa. Af-carabiga ma aqaan. Hayeeshee faaqidaaddan waxay ku saleysan tahay barnaamijka qeybtiisii af-Soomaaliga aheyd. Markii aan dhageystay warbixinta intii af-Soomaaliga aheyd, waxaa ii sii iftiimay dullinnimada iyo maan-gaabnimada khawaarijta.
Ila eeg saddexdan qodob.
1—Fiidiyowgii YouTube waxaa jirta meel uu amiirkooda ina Godane leeyahay Xamar ayaynu dhuummasho ku joognay, oo guri dhexdiisa ayaynu ciidanka ku tababari jirnay innagoo iska ilaalineyno in ay dadku ina arkaan. Wuxuu yiri, "Arrinta…waxay aheyd [diyaarinta] caskariga….tadriibaad sirri ah…. [Arrinkii] tababarrada guryuhu aaday u najaxeen,” eeg daqiiqadda 53:00 ee fiidiyowga.
2—Nin kale oo Ibraahim lagu magacaabo oo isaguna af-Soomaali ku hadlayay ayaa hadal faan ku dheehan ku yiri markii lala dagaallamayay ciidankii Mareykanka ee Xamar waxaynu aheyn rag yaroo mujaahidiin ah. Waxa aynu billawnay xabbadda innagoo ka faa’iideysanayno in shacabka Xamar joogo ay nagu soo biiri doonaan oo ay dagaalka soo geli doonaan. Wuxuu yiri, "Wax billaabo un oo isku daba rido un ayay Soomaalidu markaa la’eyd’.” Wuxuuna xusay in isku dhacaas ay iyagu horseedeen isagoo leh, "Billawgeeda ayuu Ilaah sabab nooga dhigay,” eeg daqiiqadda 35:00 ee fiidiyowga.
3—Nin kale oo Cumar Dheere lagu magacaabo ayaa af-Soomaali ku hadlay. Waa ninka soo sahmiyay kaniisad qubuuro u aheyd Talyaaniga. Waa tii isaga oo kaashanayo rag uu ku jiray Aadan Ceyrow ay go’aansadeen in ay soo qufaan qabuurihii. Halkaas ayayna ka dhigteen sal-dhiggii u horreeyay ee al-Shabaab ka hawl-gasho. Cumar Dheere wuxuu isagoo isu qabo inuu Islaamka wax tarayo yiri, "Ilaah mahaddii, maanta in la burburiyayna waa wax Ilaah loogu mahdiyo…booskan weyninka badnaa ee maqbarada ugu weyneyd ee gaalada Talyaaniga…. Aannu rajeynayno runtii in een loo rogo een dhismo weyn oo Islaami ah—markaz Islaami ah,” eeg saacadda 1:04 ee fiidiyowga.
Igu celi qodobka 1-aad iyo sirtii uu amiirkii Shabaab Axmed Godane ka dhawaajiyay. Waxay khawaarijtu ku leedahay dagaal iyo jihaad baynu ku jirnaa si diinta loogu dhaqmo. Shareeco iyo Kitaabka Ilaah in xukun laga dhigto ayaynu u dagaallameynaa. Waxay culimo badan oo badan oo badan ugu naseexaysay bal u kaadiya, oo dawladda awood ha yeelato, oo waqti siiya, oo u dhimriya shacabka Muslimiinta ah, oo dagaal iyo cadow hor leh ha inoo horseedina. Way diideen. Fawdo iyo gummaadna dhaqan ka dhigteen.
Waxa aan anigu la yaabay, oo isku kay qaban weysay, diidmada khawaarijtu ay dawladda u diidaan in la siiyo waqti ay cagaheeda ku istaagto iyo hadalkii ina Godane ee oranayay waynu is qarin jirnay oo guri dhexdiisa ayaynu ku tababaran jirnay illaa aynu aakhirkii helnay xoog iyo cudud. Waxaa xusid mudan cidda uu leeyahay waan iska qarineynaa xitaa ma aheyn AMISOM iyo beesha caalamka oo xilligaas AMISOM ma aysan joogin Xamar. Cidda ay iska qarinayeen waa un shacabka. Fogaa cadaawadda khawaarijta!
Su’aashu waxay tahay, haddii urur yar oo jabhad un ah, ay dhuummaaleysi iyo isqarin marxaladdu bidday illaa ay cagahooda ku istaageen, maxay khawaarijtu u arki waayeen in dawladda Soomaaliyeed la siiyo waqti ay cagaheeda ku istaagto dawladdaasoo ka ballaaran oo ka waaxyo badan urur jabhad ah? Maxay tartiibsiga ugu diideen dawlad la xeeltameyso AMISOM iyo beesha caalamka? Maxayse uga biyo-diidaan naseexada culimada ee oraneyso Nebiguba (SCW) tartiibsi ayuu dawlad xor ah oo xooggan ku dhisayee fursad siiya dawladda Soomaaliya? Iyagii baa dhuummaalaysi ku soo xoogeystay, umase oggola in dawladdu ay tartiibsi iyo xeelaysi ku kobocdo. Maan-gaabnimo dheh!
Igu celi qodobka 2-aad iyo Ibraahimkii yiri waxaynu la dagaallannay Mareykanka. Wuxuu ku qanacsan yahay fawdo iyo dhagar uu shicibka u maleegay. Wuxuu ku faanayaa xabbadda ayaynu shicibka u billawnay. Muu dawlad u horseedo shacabka halkii uu fawdo u horseedi lahaa?
Islaamku waa diin ka hufan fawdada, dhagarta, iyo in lagu qammaaro dhiigga shacabka.
Khawaarijse arrinkaa waa u caado ay ku faanaan—diinna ay ka dhigtaan.
Igu celi qodobka 3-aad iyo Cumar Dheerihii ku faanay inuu faagtay qabuurihii Talyaaniga. Horta Axmed Godane oo arrinkaas kaniisadda ka hadlayo wuxuu yiri rag badan oo maxaakimtii ka tirsaneyd ayaa nagu diiday gelistii kaniisadda iyo faagashada qubuuraha.
Wuxuu ina Godane yiri, "Cumar Dheere wuxuu soo sahmiyay…qabuurihii talyaaniga…. Fikraduu keenay oo wuxuu yiri meeshan aan degno. Raggii….markii hore way yar ka degi weyday.” Waxaa dhalatay dood. Siduu ina Godane xusay, raggii qaar baa yiri, "Seen u degaynaa meeshan?” Dooddii waxaa ku guuleystay garabkii Cumar Dheere iyo Aadan Ceyrow, waxayna ku baaqeen, "Qabuuraha aan baabi’inoo Ilaah aan ugu dhowaanno. Xarun la’aan baaba na dishayee xarun aynu ka dhiganno. Arrintiiyaa la qaatay.”
Lakiin weli cabsi waxaa laga qabay maxaakiimtii. Maxaakiimtii waxay diidday degista qabuurihii kaniisadda. Ina Godane oo taa ka hadlayo ayaa misana yiri, "Nimankii maxaakiimta ahaa waxay billaabeeen qalabkooda inay la baxaan—iclaankii buu naga riddiyay…. Ha laga baxeey yiraahdeen,” eeg saacadda 1:02 ee fiidiyowga.
Degista qabuurihii kaniisadda inay fool-xumo iyo akhlaaq-xumo diineed tahay waxaa noogu filan diidmadii culimada maxaakiimta. Laakiin Axmed Godane iyo xulafadiisu naseexadii maxaakiimta dhegaha ayay ka gufeysteen.
Midda aniga YAQYAQSIGA ila noqotay waxay tahay—MARKHAATI cadna u ah fiiro-gaabnimada iyo maan-gaabnimada khawaarijta—hadalkii ahaa, "Qabuuraha aan baabi’inoo ILAAH AAN UGU DHAWAANNO.” Sidee buu qof Muslim ah ugu hammin karaa in uu qabuuro kaniisadeed ka dhigto sal-dhiggii u horreeyay ee uu diinta Islaamka uga adeegayo?!! Subxaanallaah!! Fool-xumo badanaa fikirkaas!! Anshax-xumaa khawaarijtu!!
Waxay qabuurihii kaniisadda ka dhigteen booskii uu Daarul Arqam ugu jiray Nebi Muxammad (SCW).
Dullinnimo iyo maan-gaabnimo waa middaa khawaarijta u qurxisay in ay qabuuro kaniisadeed u doorteen xarun ay diinta uga adeegaan iyagoo weliba uu dhulkii waasac yahay, Soomaali Muslimiin ahna ay deggan yihiin. Xaqiiqatan koox qabuuro kaniisad ka dhigtay xarun dacwo kuma adko inay berito la saftaan oo ay DAJJAAL imaam ka dhigtaan. Bilaash Xabiibkii Ilaah—sallallaahu calayhi wasallam—uguma uusan tilmaamin khawaarijtu inay yihiin SUFAHAA al-AXLAAM (doqomo maan-gaab ah oo fahankoodu liito).
Su’aasha iigu weyn ee aniga ii soo baxday waxay tahay, maxay al-Shabaab haatan u soo diyaarisay fiidiyowgan ay YouTube soo geliyeen mar haddii uu amiirkoodii dhintay?
Jawaabtu ma qurux badna.
Marka koowaad, fiidiyowgan waa borobogaando ay khawaarijtu doonayso inay kasbadaan oo ay marin habaabiyaan dhallinyaro cusub. Dhagartooda waxaa ka mid ah inay qariyeen sawirradii u dambeeyay ee Axmed Godane markuu cirraystay. Sidee buusan ku cirraysan nin gummaadayay maatada iyo hal-doorka muslimiinta habeen iyo maalin isagoo isla markaana sed-bursi iyo xafiiltan kursi kula jiray raggii ay al-Shabaabka isla maamulayeen? Taas waxaa u sii dheeraa aag-beddelashada joogtada aheyd isagoo ka baqayo duqeynta diyaaradaha darooniska ah oo dhinac ah iyo shirqool ka yimid gudaha Shabaabka oo dhinac kale ah. Ku darsoo wuxuu dhashay 1968, markuu dhintay wuxuu jiray 46.
Dhagarta khawaarijta ayay ka mid tahay inay dhallinta soo hor dhigeen un muuqaal Axmed Godane laga duubay dhallinyarnimadiisii ugu yaraan dhowr iyo toban sano ka hor. Haddii ay al-Shabaab run sheegayso, sidii ay u soo geliyeen muuqaalkii u danbeeyay ee af-hayeenkooda Sh. Cali Dheere oo garku cirraystay ayay Axmed Godane sawirradiisii u dambeeyay soo gelin lahaayeen. Laakiin waxay dhagartu la gashay inay qariyaan sawirradii amiirkooda markuu cirraystay iyagoo isla markaana dhallinta Soomaaliyeed u soo bandhigayo oo ku beerlaxawsanayo sawirradii dhallinyarnimo ee ina Godane si ay dhallintu dabinka ugu soo dhacdo. Waana dhagarta noocan ah midda ina tusineyso in khawaarijtu ay doc martay hab-dhaqankii iyo akhlaaqdii wacneyd ee salafka.
Marka labaad, hadafka duubistan wuxuu noqon karaa lacag-doon maadaama ay jabhadda al-Shabaab lumisay ilihii dhaqaale ee ugu badnaa. Haddii aysan helinna dhaqaale waxay jabhaddu og tahay in maalmaha ay jiri karto ay tirsan yihiin.
Ugu danbeyntii, waxay duubistaan abshir u tahay Muslimiinta Soomaaliyeed. Waa duubis bidhaaminayso quus ay al-Shabaab ka qabto inaysan sii jiri doonin urur ahaan oo dhinac ah iyo dhinac kale oo ah tebis ay khawaarijtu tebayso maalmihii ay xaaraanta ku heysteen ilihii dhaqaale ee suuqa Bakaaraha, dekedda Kismaayo, beerihii waaweynaa, dhulkii waasaca ahaa, geelii iyo lo’dii iyo riyihii ay qasabka ku boobi jireen iyagoo sako ku marmarsiyoonayo, iyo amar-ku-taagleyntoodii joogtada ahaa ee ku saleysnaa fasaadka iyo xad-gudubka iyo daadinta dhiiggii culimada iyo hal-doorka iyo shacabka Soomaaliyeed.
Abshirtu waxay tahay, Ibn Maajah ayaa qorayo Xaddiis oranayo, "Markay [khawaarijtu madaxa] kor u soo qaadaanba Eebbe wuxuu ku sallidi doonaa cudud qabato.”
Fiidiyowgan ay khawaarijtu soo dhigtay YouTube wuxuu daliil u yahay in ay rajo-beel yihiin maadaama looga adkaaday Soomaaliya iyo dagaalka noocyadiisa kala duwan ee kala ah mid caskari, mid diin, mid dhaqaale, mid juqraafi, mid warbaahin, mid afkaar, mid shacab, mid asluub iyo akhlaaqba—inta ka hartayna ay isa soo dhiibi doonaan iyagoo hanuunsan. Alxamdulillaah!!
Dhiillo Ammaan Mise Dheel Kubbadeed; Kaddib Faarujintii Istaaddio Muqdisho!!
Liban Maitv Iyo Familkiisa oo Loogu Tacsiyadeynayo Geeridii Aabahooda
Mareykanka oo labo bil kaddib Safaaraddiisa Tal Aviv u raraya Quddus
Faallo:-Ra'isulwasaare Kheyre Waa Markiisa!!!!
Raila: "diyaar ayaan u ahay dhaarinta kaddibna dhimasho?